रवि लामिछानेको विजय जुलुसमा पूर्व राजारानी ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
रवि लामिछानेको विजय जुलुसमा पूर्व राजारानी !
बिहीबार गृह जिल्ला पुगेका सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले व्यवस्था विरोधी अभियान्तालाई जनताले कुल्चिदिने चेतावनी दिए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले अयोग्य तत्वको चलखेललाई जनताले जवाफ दिने पनि बताए । यसअघि पनि मन्त्री बाँस्कोटाले गणतन्त्र र संघीयता विरोधी अभियान्ताहरु डायनासर भएर जाने चेतावनी दिएका थिए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पूर्व राजावादीलाई लक्षित गर्दै कडा टिप्पणी दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त संसदमै उभिएर पूर्व राजावादीको अभियानलाई बेमौसमको बाजा भनिसकेका छन् ।
१ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजावादीको विरोधमा खनिएका थिए । संसद सम्बोधन गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । यसपछि प्रधानमन्त्री ओली उपचारका क्रममा ५ भदौदेखि सिंगापुरमा छन् ।
तर, पूर्व राजाका समर्थकहरुसँग सत्तारुढ दल र सरकार तर्सिरहेको प्रमाण पर्याप्त देखिदैछन् । त्रसित अभिव्यक्तिको पछिल्लो शृङ्खला भने नेकपा अध्यक्ष दाहालबाट शुरु भएको देखिन्छ ।
रामेछाप पुगेर पुष्पकमल दाहालले १९ साउनमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुनबाटै लखेट्ने चेतावनी दिएका थिए । यसको अघिल्लो दिन मात्रै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । १८ साउनमा कार्यकर्तालाई ढाडस दिनेगरी अध्यक्ष थापाले अब ड्राइभर होइन, बाटो नै फेर्नुपर्ने बताएका थिए । अध्यक्ष थापाको यो चेतावनीपछि लगातार सत्तारुढ नेताहरु र विषेशगरी मन्त्रीहरुबाटै पूर्व राजा समर्थकहरुको विरोधमा अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।
संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्ने पूर्व पञ्चहरुको पाटी राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता पनि सत्तारुढ नेताहरुको अभिव्यक्तिको जवाफबाट पछि हटेको देखिदैन । २४ साउनमा काभ्रेको धुलिखेलमा पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले भनेका छन्, “हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको माग राख्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो ।”
सवाल–जवाफको शृङ्खलामा अहिले जोडिएका छन्, टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने प्रकरण । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरी पाँच लाख धरौटीमा छोडेका रवि लामिछानेलाई नेकपाका केही नेताहरुले पूर्व राजावादीसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।
लामिछानेका समर्थनमा निस्किएका प्रदर्शनमा पूर्व राजावादी शैलीको जुुलुस र पूर्व राजारानीको तस्वीर अंकित टी–सर्टलाई देखाएर देशमा प्रतिगमनकारीको चलखेल बढेको आशंका गरिरहेका छन् । नेकपाका कार्यकर्ताहरुले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्– रवि लामिछानेको विजय जुलुसमा पूर्व राजारानीको तस्वीर अंकित टी–सर्ट कहाँबाट आयो रु
२०७४ को निर्वाचनमा भने अहिले सत्तारुढ तर्सिरहेको शक्ति राप्रपाले अत्यन्तै कम जनमत पाएको थियो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार, १,९६,७८२ ९२।०६ प्रतिशत० मात्रै मत राप्रपाले पाएपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाउन सकेको छैन । हिमालखबरमा समाचार छ ।